के हामी सैतानसित डराउनु पर्छ?
कार्बन मोनोक्साइड ग्याँस देखिंदैन र यो खतरनाक छ; सैतान पनि त्यस्तै छ
यसको भेउ पाउन निकै गाह्रो छ; न त रङ्ग छ न गन्ध नै आउँछ। यसले सिकारलाई पत्तै नदिई ज्यान लिन्छ। विश्वभरि विषालु तत्त्वले गर्दा मृत्यु हुनेहरूमध्ये आधाभन्दा धेरै मानिसहरूको ज्यान यसैले लिन्छ। यो डरलाग्दो सिकारी हो: कार्बन मोनोक्साइड ग्याँस। तर हामी आत्तिनु पर्दैन। किनभने यो ग्याँसको खतरा पत्ता लगाउने र यसबाट बच्ने उपायहरू छन्‌। थुप्रै मानिसले यो ग्याँसको खतराबारे सङ्केत दिने उपकरणहरू जडान गरेका छन्‌ र तिनीहरू त्यस्ता उपकरणहरूले सावधान गराउने बित्तिकै सचेत हुन्छन्‌।
कार्बन मोनोक्साइड ग्याँस जस्तै सैतान पनि अदृश्य छ। त्यसको अस्तित्व पत्ता लगाउन निकै गाह्रो छ र त्यो खतरनाक पनि छ। तर परमेश्वरले हामीलाई मदत नदिई अलपत्र छोड्नुभएको छैन। परमेश्वरले दिनुभएका निम्न उपहारहरूको सदुपयोग गऱ्यौं भने हामी सैतानसित पटक्कै डराउनुपर्दैन।
छनौट। याकूब ४:७ मा सैतानको “विरोध गर अनि ऊ तिमीहरूबाट भाग्नेछ” भनेर लेखिएको छ। सैतान शक्तिशाली भए तापनि त्यसले जबरजस्ती तपाईंले नचाहेको काम गराउन सक्दैन। त्यसको इशारामा चल्ने या त्यसको विरोध गर्ने, तपाईं छान्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस ५:९ मा यस्तो लेखिएको पाउँछौं: “विश्वासमा दह्रो भएर त्यसविरुद्ध खडा होओ।” याद गर्नुहोस्, येशूले सैतानको तीनवटै प्रलोभन तिरस्कार गर्नुभएपछि त्यसले उहाँलाई छोडेर गएको थियो। (मत्ती ४:११) येशूले जस्तै तपाईंले पनि सैतानको दबाबविरुद्ध खडा हुने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरसितको मित्रता। याकूब ४:८ मा यस्तो प्रोत्साहन दिइएको छ: “परमेश्वरसित नजिक होओ।” यहोवा परमेश्वर आफैले तपाईंलाई उहाँसित घनिष्ठ हुन निम्तो दिनुभएको छ। तर तपाईं कसरी उहाँको साथी बन्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा राम्रो तरिका बाइबलबाट उहाँबारे अझ धेरै सिक्नु हो। (यूहन्ना १७:३) यहोवा परमेश्वरबारे पाएको ज्ञानले गर्दा तपाईं उहाँलाई माया गर्न उत्प्रेरित हुनुहुनेछ र यही मायाले तपाईंलाई उहाँको इच्छा पूरा गर्न जुरमुऱ्याउनेछ। (१ यूहन्ना ५:३) स्वर्गमा बस्नुहुने बुबासित तपाईंले नजिक हुने प्रयास गर्दा उहाँले चाहिं कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? याकूबको किताबमा यस्तो पनि लेखिएको छ: “उहाँ तिमीहरूसित नजिक हुनुहुनेछ।”
यहोवा परमेश्वरले हाम्रो सुरक्षाको लागि थुप्रै प्रबन्ध गर्नुभएको छ
सुरक्षाको प्रतिज्ञा। हितोपदेश १८:१० मा यस्तो लेखिएको छ: “परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहराजस्तै हो, त्यहाँ धर्मीहरू शरणको निम्ति कुदेर जान्छन्‌।” यस पदले परमेश्वरको नाउँ लिनेबित्तिकै त्यसले जादुको छडीले जस्तै काम गर्छ भन्न खोजेको त होइन। बरु यसको अर्थ परमेश्वरको नाउँको गहिरो आदर गर्नेहरूले सुरक्षाको लागि जुनसुकै बेला उहाँलाई पुकार्न सक्छन्‌ भन्ने हो।
बाइबलमा दिइएको उदाहरण। एफिसस सहरमा भर्खरै ख्रीष्टियन बनेकाहरूबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं। प्रेषित १९:१९ यसो भन्छ: “पहिले-पहिले जादुगरी गर्ने थुप्रै मानिसले आफ्ना पुस्तकहरू ल्याए अनि सबैसामु ती जलाए। अनि तिनीहरूले त्यसको मोल निकाल्दा पचास हजार चाँदीको टुक्रा बराबर पाए।” * जतिसुकै महँगो भए तापनि तन्त्रमन्त्रसित सम्बन्धित हरेक कुरालाई ती ख्रीष्टियनहरूले नष्ट गरिदिए। यस उदाहरणले आज हामीलाई राम्रो पाठ सिकाउँछ। यो संसार जादुगरी र तन्त्रमन्त्रमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। तन्त्रमन्त्रसित सम्बन्धित कुरा अथवा चलनहरू हानिकारक नदेखिए तापनि सैतानले हामीलाई ती कुरामार्फत असर गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू जति नै बहुमूल्य भए तापनि तपाईं यी कुराहरूबाट अलगै रहनु निकै महत्त्वपूर्ण छ।—व्यवस्था १८:१०-१२.
यस पत्रिकाको सुरुको लेखमा बताइएका रोकेल्यो पचास वर्ष पुग्दा पनि सैतान छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन थिए। तर पछि तिनले आफ्नो विचार परिवर्तन गरे। किन? तिनी भन्छन्‌: “जीवनमा पहिलो चोटि मैले बाइबल पाएँ। धर्मशास्त्रबाट पाएको ज्ञानले सैतान साँच्चै छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वस्त बनाएको छ र सैतानको प्रभावबाट सुरक्षित हुन पनि मदत गरेको छ।”
“धर्मशास्त्रबाट पाएको ज्ञानले सैतान साँच्चै छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वस्त बनाएको छ र सैतानको प्रभावबाट सुरक्षित हुन पनि मदत गरेको छ”
के तपाईं सैतानको नामोनिसानै नरहने दिन हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यो दिन अवश्य आउनेछ। थुप्रैलाई बहकाउन सफल त्यो सैतानलाई भविष्यमा “आगो र गन्धकको कुण्डमा हुर्ऱ्याइनेछ” भनी धर्मशास्त्रमा बताइएको छ। (प्रकाश २०:१०) साँच्चैको आगो र गन्धकले अदृश्य व्यक्तिलाई हानि पुऱ्याउन सक्दैन। त्यसैले यस पदमा उल्लेख गरिएको आगोको कुण्डले पूर्ण रूपमा विनाश हुने कुरालाई चित्रण गर्छ। सैतान सधैंको लागि विनाश हुनेछ। त्यसबेला परमेश्वरलाई माया गर्नेहरू कत्ति हर्षित हुनेछन्‌!
त्यो समय नआएसम्म यहोवा परमेश्वर र उहाँको स्तरबारे सिकिरहनुहोस्। * कल्पना गर्नुहोस् त! “सैतान छैन” भनेर साँच्चै भन्न सक्ने समयमा बाँच्न पाउनु कत्ति खुसीको कुरा हुनेछ।
^ अनु. 8 यदि यस पदमा बताइएको चाँदीको टुक्रा रोमी दिनार थियो भने यो रकम ५०,००० कामदारले एक दिनमा कमाउने ज्याला बराबर थियो—यो निकै ठूलो रकम हो।
^ अनु. 11 तन्त्रमन्त्रबारे परमेश्वरको विचार र सैतानबारे थप जानकारीको लागि बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय १० हेर्नुहोस्। यो किताब कुनै पनि यहोवाका साक्षीसित लिन सक्नुहुन्छ।
स्वर्गदूतहरूबारे बाइबलले के सिकाउँछ?
बाइबलमा स्वर्गदूतहरू अनि प्रेतहरूबारे उल्लेख गरिएको छ। के यी अदृश्‍य व्यक्‍तिहरू साँच्चै अस्तित्वमा छन्‌? के तिनीहरू हामीलाई मदत वा हानि गर्न सक्छन्‌?
परमेश्‍वरले पृथ्वी किन सृष्टि गर्नुभयो, दुःखकष्टको अन्त कहिले हुन्छ, पृथ्वीको भविष्य कस्तो छ अनि त्यहाँ को-को बस्न पाउनेछन्‌? बाइबलले यी प्रश्‍नहरूको जवाफ दिन्छ।